DAAWO: Qaabkii Waalida Ahaa Ee Uu Mourinho Ugu Maadsaday Jamaahiirta Juventus, Falcelintii Ciyaartoyda Old Lady Iyo Sababta Ka Danbaysay Oo Uu Mourinho Ka Hadlay. – GOOL24.NET
DAAWO: Qaabkii Waalida Ahaa Ee Uu Mourinho Ugu Maadsaday Jamaahiirta Juventus, Falcelintii Ciyaartoyda Old Lady Iyo Sababta Ka Danbaysay Oo Uu Mourinho Ka Hadlay.
Tababaraha kooxda Manchester United ee Jose Mourinho ayaa eedayn kula kulmay qaabkii uu jamaahiirta kooxda Juventus ugu maadsaday markii ay soo dhamaatay ciyaartii qaabka layaabka leh ku dhamaatay ee ay kooxdiisa Man United guusha soo laabashada ahayd ka soo gaadhay Juventus.
Jose Mourinho ayaa isaga oo xamaasadaysan soo dhex galay garoonka Juventus wuxuuna si daan daansi leh ugu maadsaday jamaahiirta kooxda Juventus oo ay hore iskugu soo eedeen waqtigiisii Inter Milan isla markaana ay iskugu soo dhaceen kulankii Old Trafford.
Jose Mourinho ayaa isaga oo farxad iyo xamaasadi ka buuxda waxa uu gacantiisa saaray dhegta si uu jamaahiirta kooxda Juventus ugu maadsado oo ay sare u qayliyaan waqti ay kooxdoodu murugo ku jirtay wuxuuna sheegay in isagaba 90 daqiiqo la aflagaadaynayay.
Paul Scholes ayaa Mourinho eedayn xoogan ugu soo jeediyay hab dhaqankiisii kulankii Juventus wuxuuna sheegay in meel kasta oo uu tago ay sidaa tahay xaaladiisu balse Mourinho ayaa ku dooday in aanu cidna weerar ku qaadin.
Jose Mourinho oo la hadlay Sky Sports Italia ayaa yidhi: “Waxaa aniga la icaayay 90 daqiiqo. Quruxleyda Talyaaniga ayaa 90 daqiiqo i caayaysay, waxaan halkan u mid in aan shaqadayda qabto, wax ka badan ma aha. Anigu cidna weerar kumaan qaadin dhamaadkii, kaliya waxaan sameeyay tilmaan ama xanshashaq taas oo aan ku doonayay in aan qaylo dheer kaga maqlo”.
Laakiin Mourinho ayaa markii uu miyarsaday qirtay in ay ahayd in aanu samayn falcelintii jamaahiirta Juventus wuxuuna yidhi: “Ugu dhawaan waxaa waajib ahayd in aanan samayn, maskaxda degan taas maan ku sameeyeen, laakiin iyada oo la aflagaadeeyay qoyskayga, qoyska Inter sidan ayaan uga falceliyay”.
Halkan ka daawo qaabkii waalida ahayd ee uu Mourinho ugu maadsaday jamaahiirta Juventus iyo falcelintii xooganayd ee ay ciyaartoyda Old Lady ka sameeyeen:
Manchester United ayaa kadib guushii Juventus waxay isku diyaarin doontaa kulanka Manchester Derby iyada oo soo heshay kalsooni buuxda oo ay kula dagaalami karto kooxda duulaysa ee Man City oo iyaduba xasuuq wayn u gaysatay Shakhtar.
Laakiin iyada oo Man United ku soo laabtay hanaanka fiican ee uu Mourinho inta badan soo raadinayay waxa uu kulanka Manchester United iyo Manchester City noqon doonaa mid ka xiiso badan sidii uu ahaan lahaa dhawr todobaad ka hor markii ay United xaalada xun ku jirtay.